क्रेता संरक्षण - हेर्नुहोस् र्यापोर्ट
र्यापोर्ट क्रेता संरक्षण हेर्नुहोस्
१००% विश्वसनीय चेकआउट
क्रेता संरक्षण FAQ
के खरीददार संरक्षण नि: शुल्क छ?
हो। क्रेता सुरक्षा १००% नि: शुल्क छ
के खरीददार सुरक्षा सबै लेनदेन को लागी लागू हुन्छ?
हो। सबै लेनदेन AZ बाट सुरक्षित छन्।
के म खरीददार सुरक्षा अझै सक्रिय छ यदि म वेबसाइट को बाहिर खरीद?
दूर्भाग्यवश होइन। यदि तपाईं प्लेटफर्ममा सम्झौता गर्नुहुन्छ, तपाईं खरीददार सुरक्षाको लागि योग्य हुनुहुन्न।
के बोई संरक्षण सबै लेनदेन आकारहरूमा लागू हुन्छ?
क्रेता सुरक्षा सबै लेनदेन को लागी $ 2M को लागी लागू हुन्छ।
उद्योगमा सब भन्दा क्रेता संरक्षण।
वाच र्यापोर्टको निःशुल्क खरीददार संरक्षणको साथ तपाईंको खरीद सुरक्षित गर्नुहोस्: प्रमाणित डीलरहरू, सुरक्षित भुक्तानी विकल्प, र एक प्रमाणिक ग्यारेन्टी।
क्रेता संरक्षण हाइलाइटहरू
प्रमाणित सूचीबद्ध र विक्रेता
वाचहरू खरीद गर्नु विश्वासको कुरा हो। त्यसकारण हामी वाच सूचीमा वाचहरू सूचीकृत गर्नु अघि कडा मापदण्डको प्रयोग गरेर प्रत्येक लिस्टिंग वा बिक्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रमाणीकरण गर्छौं।
विश्वसनीय चेकआउट मार्फत भुक्तानी
बाँकी रकम सिधा वाच रेपोर्टमा भुक्तान गरिन्छ, जहाँ यो सुरक्षित राखिन्छ जबसम्म तपाईं आफ्नो हातमा तपाईंको सपना घडी हुनुहुन्न। विश्वसनीय चेकआउट नि: शुल्क छ। सबै सूचिहरूले विश्वसनीय चेकआउट मार्फत भुक्तानी प्रशोधन गर्दछ।
हामीले अतिरिक्त शिपिंग कभरेज प्रदान गर्न ईनगार्डेसँग साझेदारी ग .्यौं। तपाईं कम शुल्कको लागि चेकआउटमा शिपिंग कभरेज थप्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंलाई वाच र्यापोर्टमा खरीद गरिएको वाचको सत्यताको बारेमा कुनै शंका छ भने, हामीलाई तपाईंको अर्डर प्राप्त भएको 30० दिन भित्र सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई तुरुन्तै सन्तोषजनक समाधान भेट्टाउन मद्दत गर्नेछौं। एक फेला पार्न नसकिने संभावनामा, तपाईंलाई तपाईंको पैसा फिर्ता गरिनेछ।
बहु भाषाहरूमा निजीकृत समर्थन
दुर्लभ मामिलामा कि केहि योजनाको रूपमा चल्दैन, तपाईं हाम्रो विश्व-स्तरीय ग्राहक सेवा टीममा भर पर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई तुरुन्तै सन्तोषजनक समाधान भेट्टाउन मद्दत गर्नेछौं।
यदि घडी वितरित छैन वा वर्णनबाट भटकियो भने, तपाईं पूर्ण फिर्ती प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एक पटक तपाईं अर्डर रद्द गर्नुभयो र घडी फिर्ता गर्नुभयो, तपाईं तपाईंको पैसा फिर्ता प्राप्त गर्नुहुनेछ।
स्वतन्त्र लेखा परीक्षक र विशेषज्ञहरूले तपाईंको टाईमपीस (हरू) को गुणस्तर र प्रमाणिकरण प्रमाणिकरण गर्नेछ। यी उत्पादनहरूको मूल्या in्कनमा धेरै वर्षको अनुभवले सबै रंगहरू, कोटिंग्स, चिह्नहरू, भागहरू, रत्नहरू, धातुहरू, नापहरू, प्लेटि, र राम्रा विवरणहरू मूल निर्माण विनिर्देशहरू हुन् भनेर जाँच गर्दछ।
हाम्रो ग्राहकहरु हामीलाई माया गर्छन्
हामी निर्दोष ट्र्याक रेकर्ड राख्न प्रयास गर्दछौं। किन हाम्रा ग्राहकहरु हामीलाई माया गर्छन्। लक्जरी वाच उद्योगका लागि सुरक्षित र विश्वसनीय समुदाय निर्माण गर्नु हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो मौलिक र मूल मान भरोसा र सुरक्षा हो।
सुरक्षा तपाईंलाई आवश्यक छ, मानसिक शान्ति तपाईंले योग्य हुनुहुन्छ
तपाईंको वित्तीय जानकारी
वाच र्यापोर्टले तपाईंको लेनदेन सुरक्षित राख्नेछ हाम्रो विक्रेताहरूसँग तपाईंको आर्थिक वा व्यक्तिगत जानकारी साझा नगरी।
हामी लेनदेन २ 24/7। निगरानी गर्दछौं। यसले तपाईंलाई आराम गर्न सजिलो पार्दछ।
हाम्रो एन्क्रिप्शन मद्दत तपाइँको अनलाइन लेनदेन शुरू देखि समाप्त गर्न संरक्षित राख्छ।
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंले शicious्कास्पद सूचीबद्ध देख्नुभयो भने, हामी तपाईंलाई कपटपूर्ण प्रस्तावहरूबाट आफूलाई जोगाउन मद्दत गर्न सक्दछौं।
कुनै चिन्ता बिना अनलाइन खरीद गर्नुहोस्
ग्यारेन्टी गरिएको सुरक्षित र सुरक्षित चेकआउट। ईन्क्रिप्टेड विश्वसनीय लेनदेन को हरेक कदम।
क्रेता संरक्षण तथ्यहरु
नि: शुल्क खरीददार सुरक्षा तपाईंको खरीद चिन्तामुक्त अनलाइन बनाउँछ।
वाच र्यापोर्टले लग्जरी वाच ट्रेडलाई पुन: परिभाषित गर्दै छ र नयाँ बेन्चमार्कहरू सेट गर्दैछ। हाम्रो उपहार र प्रतिष्ठा छिटो विश्वव्यापी रूपमा विस्तार हुँदैछ। उच्च अनुभवी व्यक्तिहरू प्रत्येक दिन हाम्रो बजार सुधार गर्न र विश्व-स्तरीय ग्राहक सेवा दुबै खरीददारहरू र लक्जरी वाचका विक्रेताहरूलाई प्रस्ताव गर्न काम गर्दछन्।
हामीसँग पछाडि बाटोको हरेक पाइला छ।
ग्यारेन्टी गरिएको खरीददार सुरक्षा
आत्मविश्वासका साथ किन्नुहोस्
संरक्षण तपाईं भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ
यदि तपाईंले आदेश गर्नुभएको वस्तु प्राप्त गर्नुभएन, वा यो यसको विवरणबाट उल्लेखनीय रूपमा देखिन्छ भने, तपाईं खरीद संरक्षणको लागि योग्य हुनुहुनेछ, र हामी तपाईंलाई पूर्ण खरीद मूल्यको साथै कुनै शिपिंग लागत, सर्त र सीमाहरूको अधीनमा प्रतिपूर्ति गर्नेछौं।
के हेर्नुहोस् र्यापोर्टको खरीद सुरक्षाको साथ कभर गरिएको छ
के दुर्लभ मामिलामा हामीले कवर गर्छौं तपाईंको लेनदेन वर्णन गरिएको छैन।
तपाईंले एउटा वाच खरीद गर्नुभयो तर एउटा औंठी प्राप्त गर्नुभयो
तपाईंले "नयाँ" को रूपमा वर्णन गरिएको वस्तु खरीद गर्नुभयो, तर प्रयोग गरिएको केही प्राप्त गर्नुभयो
तपाईंले items आईटमहरू खरीद गर्नुभयो, तर केवल २ प्राप्त गर्नुभयो
वस्तु ढुवानी गर्दा क्षतिग्रस्त भयो
आइटमले हराएको भागहरू हराएको छ जुन अन्यथा दर्साइएको थियो
तपाईंले आइटम खरीद गर्नुभयो तर यसको सट्टामा नकफ प्राप्त गर्नुभयो
१००+ वर्षको संयुक्त अनुभव
एक अग्रणी लक्जरी वाच बजारहरूमा
विश्वव्यापी विक्रेता हजारौं
,45,000 XNUMX,००० अद्वितीय आगन्तुकहरू
प्रति दिन हजारौं आगन्तुकहरू र बढ्दै
680,000+ उत्पाद सूचीबद्ध
हजारौं वाच प्रस्तावहरू
2B + जडित सूचीमा
मूल्यमा लाखौं कुल घडी
विश्व स्तरीय समर्थन २ world/24 प्रदान गर्दै
अनुपम ग्राहक सेवा
संख्यामा Rapport हेर्नुहोस्
२०१ since देखि बजार हेर्नुहोस्
प्रति दिन आगन्तुकहरू
सूचीबद्ध उत्पादनहरूको कुल मूल्य
संसारभरि हेर्नुहोस् र किन्नुहोस्
मान्छे के भनिरहेछन्
सेवा प्रतिनिधि एक ठूलो मद्दत थियो। मैले आदेश गरेको पहिलो घडी मन परेन। उसले मलाई घडी फिर्ता पठाएर र मैले रुचाएको घडी सुरक्षित गरेर मद्दत गरे। महान सेवा! पक्कै पनि दोहोर्याउने ग्राहक हुनेछ !!
मैले केहि समय यहाँ शपिंग गरेको छु। यो लगाउन धेरै आरामदायक सामान प्रदान गर्दछ। यस कुराले मलाई यस घडीको बारेमा सब भन्दा हडताल गर्दछ। हल्का वजन र धेरै राम्रो गुण। डायल सहज र स्पष्ट सुगम छ। यसमा रेडियम घण्टा अंकहरू छन् जुन अन्धकारमा समय बताउन मद्दत गर्दछ। पट्टा सबै राम्रो गुणको छाला र धेरै सहज छ। म यस्तो तथ्यको साथ धेरै खुसी छु कि यस्तो राम्रो गुणको घडी वाच र्यापोर्ट द्वारा उचित मूल्यवान छ।
मैले यसभन्दा पहिले साइटमा धेरै वाचहरू खरीद गरेको छु र प्रत्येक खरीद साँच्चिकै राम्रोसँग गएको छ। मलाई सुरक्षा मन पर्छ, बुझन को सहजता साथ कदम कदम गरेर के गर्नुपर्दछ र त्यो भुक्तानी "आयोजित" गरिएको छ जबसम्म तपाईं निश्चित हुनुहुन्न कि सबै ठीक छ। यस पटक मैले नयाँ हब्लोट किन्नको लागि कदम बढाए र उही तरीका र सबै चीजहरू पहिले प्रयोग गर्ने निर्णय गरे। वाच र्यापोर्टसँग धेरै खुसी छन् र मेरो नयाँ घडीसँग पनि खुशी छन्।
उत्कृष्ट सेवा, सुरुचिपूर्ण, व्यवस्थित, विवेकी र निजी, अत्यन्त स्वागतयोग्य, विनम्र र आरामदायक। मेरो गौरवशाली घडीको बिक्रीलाई अत्यन्त दक्षताका साथ ह्यान्डल गरियो, प्रतिस्थापनको रूपमा पार्ट-एक्सचेन्ज टाइमपीसमा मलाई मार्गनिर्देशन गर्दै। निश्चित रूपमा फेरि सँगै व्यापार गर्दछ।
यस समयमा हामी केवल बैंक तार स्थानान्तरणलाई हाम्रो भुक्तानीको रूपमा स्वीकार गर्दछौं।